‘ज्ञानेन्द्र शाही मैमत्त साढेँ हो, कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’ – मेयर रेणु दाहाल – ताजा समाचार
‘ज्ञानेन्द्र शाही मैमत्त साढेँ हो, कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’ – मेयर रेणु दाहाल
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आफुले भ्र’ष्टचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएकी छिन् ।
कालिका एफएम र कालिका एचडी टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फेस टु फेस’मा कुराकानी गर्दै मेयर दाहालले यस्तो चुनौती दिएकी हुन् । उनले शाहीलाई चोक चोकमा कराउँनु भन्दा अदालतमा आफुबि’रुद्ध मु’द्दा नै हाल्न चुनौती दिइन् ।
अन्तरवार्ताको क्रममा उनले भनिन् ‘ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने एउटा व्यक्ति छन् । उनले पनि तथानाम बोल्दै हिडिरहेका छन् । मैमत्त साँडे जस्तो भएर । मात्तिएको साँडे जसरी देशव्यापी हिडेका छन् । रेनु दाहालले १२ करोड भ्र’ष्टचार ग¥यो भन्दै हिडेका छन् । लोकतन्त्र गणतन्त्र के छाडातन्त्रको लागि ल्याएका हौँ हामीले ? जसलाई जे भन्न पनि पाईन्छ ? म च्यालेन्ज गर्छु ज्ञानेन्द्र शाहीलाई । रेनु दाहालले भ्र’ष्टचार गरेको भन्दै चोक चोकमा कुर्लिने होईन की प्रमाणसहित अदालतमा मु’द्धा हाल्दिनुस ।’
अनावश्यक मनपरी बोल्नेलाई कारवाहीको दायरामा सरकारले ल्याउनुपर्ने उनले बताईन् । अब पनि ज्ञानेन्द्र शाही भरतपुर महनगरमा आएर जथाभावी बोल्ने र क्रियाकलाप गरे का’रवाहीको दायरामा ल्याउन महानगरपछि नहट्ने मेयर दाहालले बताईन् ।
साथै उनले केन्द्र सरकारलाई पनि अहिले बबी रहेको मनपरी तन्त्र र बेतिथीहरुको नियमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिन् ।